श्रीमति र छोरासँगै बि*ष खान्छु भन्दै शिशिर भण्डारी बसेकै घरमा आए, होचा गोपी ! – भिडियोमै हेर्नुहाेस् – PathivaraOnline
Home > भिडियो > श्रीमति र छोरासँगै बि*ष खान्छु भन्दै शिशिर भण्डारी बसेकै घरमा आए, होचा गोपी ! – भिडियोमै हेर्नुहाेस्
श्रीमति र छोरासँगै बि*ष खान्छु भन्दै शिशिर भण्डारी बसेकै घरमा आए, होचा गोपी ! – भिडियोमै हेर्नुहाेस्
admin July 23, 2019 भिडियो, समाज	0
शिशिर भण्डारी । होचो कदका गोपी मिजारले हामीलाई भेटेपछि आफ्ना सारा दुख सुनाए । गरिबीको मारमा परेका गोपीको दुख सांच्चै ठुलो रहेछ । उनले धेरैपटक ज्यान फाल्ने प्रयाश पनि गरेछन् । मलाई फोनमा पनि गोपीले शिशिर सर म तपाईलाई भेट्न नपाए ६ बर्षको छोरा र श्रीमती सहित ज्यान फाल्छु भनेका थिए । हामीलाई भेट्न नुवाकोटबाट गाउंका साथीसंग हजार रुपैंया मागेर आएका गोपी मिजारको ढिकुरेमा घर छैन । उनी बारीको पाटोमा पानी चुहिने र शौचालय नभएको कटेरोमा बस्दा रहेछन् । गोपीको मुखबाट अति दुखको कुरा शौचालय नहुंदा प्लाष्टिकमा दिशा पिसाब गरेर फाल्नुपर्छ भन्ने सुन्दा मन भक्कानिएर आयो ।
हुन त गोपी आफुले जानेको काम पनि गर्छन् । उनी जुत्ता छाता बनाउंछन् । घरमा श्रीमती र ६ बर्षको छोरा छन् । अघिल्लो सन्तानको रुपमा जन्मिएकी अपांगता भएकी छोरीलाई उपचार गराउने क्रममा ऋण गरेर ३ लाख खर्च गरे तर बिडम्बना छोरीको ज्यान गयो । त्यसपछि उनी ऋणमा डुबे । बसेको ठाउंबाट जग्गा धनीले निस्केर जा भन्दैछ, ३ महिनादेखि भाडा तिर्न सकेको छैन, यसैबिच छोराको घांटीको अप्रेशन गर्नु पर्यो । यसैबिच गोपीको श्रीमतीले बिषादीको प्रयोग गरेर छोरा सहित जीवन त्याग्ने प्रयाश पनि गरिन् ।
आमासंग शारीरिक सम्पर्क गरेको युवक नै छोरी माग्न आएपछि… !
नोबेल अस्पताल बिराटनगरकाे लापर*वाहीले घुँडाकाे अपरेशन गर्दा मान्छेकै ज्या*न गयो, दहवीबजारमा बन्द – भिडियो सहित
खुशी आउदै कृष्ण र मुनाकाे जीवनमाः करेन्ट लागेर दुबै हात र १ खुट्टा गुमाएका कृष्णको लागि सहयोगको ओइरों, यूकेबाट कृतिम हात खुट्टा मगाईदै – भिडियो सहित
वीरगञ्जको एक होटल अगाडि बेवारिसे शव, कस्को कसरी आयो?
गरेर खाएकाे कसैले देख्न नसक्ने कस्तो यो समाज? पोखरीमा कसैले बीष हालिदिएपछि…
पति बाहिर भएको बेला ग’र्भवती भएकि श्रीमतिले दिइन् दुनियाँ चकित हुने यस्तो जवाफ! (भिडियो)
श्रीमान घर आउँदा श्रीमतिको शव खाट मुनी भेटिएपछि… (भिडियो हेर्नुस्)
श्रीमति पोइला गएको सहन नसकेपछि गरे यस्तो अचम्म्काे हर्कत, प्रहरी नै चकित!
पतिको गोप्य अं’गमा ते’जा’ब खन्याएर प्रेमीसँग रासलिला गर्दागर्दै रंगेहात समातिइन महिला! (भिडियो)
फेरि १८ दिन लकडाउन हुन सक्ने!